सौन्दर्य सैलुनमा प्रयोग गरिने विभिन्न प्रकारका पेशेवर कपाल हटाउने यन्त्रहरूको परिचय-प्राविधिक जानकारी-शेन्जेन नोबल स्मार्ट निर्माण प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेड।
सौंदर्य सैलुनमा प्रयोग गरिने विभिन्न प्रकारका पेशेवर कपाल हटाउने उपकरणहरूको परिचय
समय: 2020-11-05 हिट्स: 2
शरीरको कपालले सजिलैसँग गन्धको उत्सर्जन गर्दछ, तर यसले अशुद्ध र अपवित्र पनि महसुस गर्दछ। त्यसकारण हामीले अतिरिक्त शरीरको कपाल हटाउनुपर्दछ, तर कपाल हटाउने परम्परागत तरिकाले मान्छेले यसलाई सजिलैसँग प्रयास गर्न हिम्मत गर्दैन। जहाँसम्म, सौन्दर्य उद्योगको विकासको साथ, व्यक्तिहरू ब्यूटी सैलूनमा कपाल हटाउने रमाइलो गर्न पनि चाहन्छन्, त्यसो भए सौन्दर्य सैलुनमा कपाल हटाउने उपकरणको बारेमा के हुन्छ?
लेजर कपाल हटाउन मेलानिन को छाला कपाल फोलिकल गहिरो प्रकाश छ, यो छनौट फोटोन ऊर्जा को विशिष्ट तरंगदैर्ध्य शोषण, थर्मल प्रभाव उत्पादन, कपाल faclicag जमावट हराएको उत्थान क्षमता। यद्यपि यसले छाला र पसिना ग्रंथिलाई हानी गर्दैन। हामी वरपरको टिशूलाई क्षति पुर्‍याउने र स्थायी शंकु प्राप्त गर्नबाट जोगिन्छौं। त्यसो भए सौन्दर्य सैलुनको कपाल हटाउने उपकरण के हो?
१. अप्टिकल फ्रिजिंग पेनलेस डिपेलेटर
ब्यूटी सैलुनको अपरेटर यस उपकरणसँग परिचित छ, र बजारमा बिक्रीको मात्रा धेरै राम्रो छ। त्यहाँ फ्रिजिंग पोइन्ट डिपाइलेशन छ, जसले यो तातो अवधिमा राम्रो डिप्रेलेसन अनुभव प्रदान गर्दछ र उन्नत फ्ल्याट-टप्ड स्क्वायर वेभ टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ। नीलमणि चिसो प्रणाली छाला चिसो राख्न र कपाल हटाउन सुरक्षित बनाउन डबल सुरक्षा थप्न जोडिएको छ। कपाल हटाउने र छाला पनि चिल्लो बनाउन को लागी, स्थायी कपाल हटाउन को लागी 3-4- times पटक प्रभाव प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसको कार्य धेरै र विविध छ, उपभोग्य सामग्री अधिक छ, अन्तमा लागत सस्तो छैन।
२.2.808०XNUMX लेजर डिपिलेटर
हाल, सबैभन्दा उन्नत लेजर कपाल हटाउने उपकरण, परम्परागत लेजर उपकरणको उत्तेजना बिना, फ्रीजिंग र पीडाविहीन, सेमीकन्डक्टर लेजर टेक्नोलोजी एक चिकित्सा-ग्रेड पेशेवर कपाल हटाउने टेक्नोलोजी हो जुन संवेदनशील छालामा प्रयोग गर्न सकिन्छ, प्रयोगशालाको मन्त्रालय कपाल हटाउन सकिन्छ, संवेदनशील स्थानको कपाल जस्तै बगल कपाल, बिकनी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, यो लेजर हटाउन अत्यधिक ध्यान केन्द्रित ऊर्जा को उपयोग गर्दछ, 90 ०% को कपाल फुलको पर्याप्त गर्मी नाश गर्न को लागी अवशोषित गर्न सक्छन्, प्रभाव क्लीनर deplot। मोडेल 808०2 स्थायी डिपिलेटरले २ ~ treat उपचार पछि स्थायी डिस्प्लेसन प्राप्त गर्न सक्दछ।
E. प्रकाश प्रकाश डेलिलेटर
सौन्दर्य सैलुनमा अन्य ठूला कपाल हटाउने उपकरण अघि देखा पर्‍यो, मूल्य अपेक्षाकृत सस्तो छ, र त्यहाँ धेरै प्रोजेक्टहरू छन् जुन पूरा गर्न सकिन्छ। कपाल हटाउने, freckles, रातोपन, सेतो पार्ने र छाला कायाकल्प सबै सम्भव छ। यो वास्तवमै आर्थिक र व्यावहारिक हो, तर कपाल हटाउने परियोजनाको कुनै फाइदा छैन। कपाल हटाउन स्पष्ट पीडा हुनेछ। यो धेरै ग्राहकहरु लाई अस्वीकार्य छ। यसको लागि प्राविधिक सीपहरू आवश्यक पर्दछ र 808०XNUMX एपिलेटर जत्तिकै हटाउन सकिदैन। सौन्दर्यकर्मी र ग्राहकहरूको लागि, कपाल हटाउने प्रक्रिया बढी गाह्रो छ, त्यसैले अब सौन्दर्य सैलुनहरूमा ठूलो मात्रामा कपाल हटाउने उपकरण मूलतः प्रतिस्थापित गरिएको छ।
अर्को: स्थायी कपाल हटाउनु तथ्य हो वा घोटाला?